Huawei P40 Pro - Unboxing na ule mbu | Akụkọ akụrụngwa
Huawei P40 Pro - Unboxing na ule mbu
Miguel Hernandez | | General, Noticias, Nyocha
Anyị enwetawo otu n'ime ihe ngosi Huawei kachasị iche na akụkọ ntolite, ọ bụkwa na oge a na-atụgharị uche biri n'ihi ọrịa a na-efe ugbu a emeela ka anyị nwee ọ enjoyụ na ngosi a oge a n'ụlọ anyị. Mkparịta ụka ndị otu Huawei na ndị teknụzụ ibe ha efuola. Otú ọ dị, dị ka ụlọ ọrụ Asia achọghị ka ị ghara ịhapụ ihe ọ bụla ha gosipụtara, ha jisiri ike nweta Huawei P40 Pro ọhụrụ n'aka anyị nkeji ole na ole mgbe e gosipụtara ya. Ghọta na anyị igbe ọhụụ nke ọhụụ ọhụrụ nke Huawei, P40 Pro, yana atụmatụ ya niile na ihe ị kwesịrị ịma gbasara akwụkwọ ọhụụ ya.
Nke mbu anyi choro ikwu banyere ya Anyị na-eme nyocha a ọzọ na imekọ ihe ọnụ na ndị enyi Androidsis, ya mere, anyị ga-ahụ nnabata na mbido mbụ ebe a na Actualidad Gadget, mana izu na-abịa ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ nyocha zuru ezu na igwefoto na ule arụmọrụ na Androidsis, ma na weebụsaịtị ya ma na ọwa YouTube. Na enweghị oge ọzọ, ka anyị gaa nkọwa nke Huawei P40 Pro.
2 Foto: Oge ntụgharị
3 Multimedia na ikike ndị ọzọ
4 Esemokwu dị iche n’etiti ụdị dị iche iche
Dịka ị pụrụ ịhụ, P40 Pro ọhụụ a enweghị ihe ọ bụla, na ọkwa ọkwa nke ike ọ pụtara ya Kirin 990 processor si Asia ike ya na 8GB Ram na Mali G76 eserese nhazi ihe eserese.
Igwefoto n'ihu 32 MP + IR
Site na teknụzụ Anyị kwesịrị ịkọwa eziokwu na anyị nwere teknụzụ nkwukọrịta 5G, Ma ọ bụ na n'akụkụ a Huawei bụ onye ọsụ ụzọ, otu n'ime ụlọ ọrụ ndị na-eji ụdị njikọ a na ụwa. Dị ka a tụrụ anya, anyị nwekwara ọgbọ ọhụụ WiFi 6, Bluetooth 5.0 na njikọ NFC iji nwee ike ịkwụ ụgwọ na ngwaọrụ ma ọ bụ mekọrịta ya.
Foto: Oge ntụgharị
Anyị nwere usoro ihe mmetụta anọ nwere mmetụta pụtara ìhè nke na-agbanwe agbanwe na ọkwa a haziri, nke a bụ ihe na-atọ onye ahụ ụtọ. Onwe m nwere obi ụtọ na nhazi igwefoto gara aga nke na-agụnyeghị obere ihe mmetụta, mana m ghọtara na ọ dị mkpa imeghari site n'oge ruo n'oge na akụkụ a iji nwee ọdịiche nke ụdị ọhụrụ ahụ na ndị "okenye". Nsonaazụ mbụ anyị rụpụtara abụrụla ihe dị ịtụnanya dị ka ị pụrụ ịhụ n'ule ndị anyị hapụrụ n'okpuru ka imepe ọnụ gị ntakịrị.
N'otu ụzọ ahụ, anyị nwere ndekọ vidiyo nwere nkwado dị egwu na mgbanwe dị mma n'etiti igwefoto, nke ahụ bụ EMUI 10.1 na-eme ka ngwa igwefoto bụrụ ezigbo ọfụma nke hapụrụ ezigbo uto n'ọnụ anyị na nnwale mbụ ndị a anyị kwenyesiri ike na ọ ga-enye anyị ezigbo nsonaazụ na ule ikpeazụ. Anyị na-achọta nhazi incipient na onyonyo a, ntakịrị ọdịiche dị n'etiti ogbugba anyị na-ewere na nsonaazụ ikpeazụ, na anyị amaghị ma ọ bụrụ na nke a dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ, ọkachasị site na ọgụgụ isi.
Multimedia na ikike ndị ọzọ
Anyị na-amalite site na ihuenyo ya dị egwu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 6,6 sentimita asatọ OLED na teknụzụ HDR niile a pụrụ ichetụ n'echiche na na dị ka mgbe niile na ika ahụ na-enye ezigbo mgbanwe agba. Anyị nwere ike ịnweta mkpebi FullHD + na ume ọhụrụ nke 90Hz Ma n'eziokwu, ọ bụ otu n'ime akụkụ nke juru m anya nke ukwuu, ihuenyo ahụ dị oke mma ma oriri vidiyo dị mma dịka ahụmịhe mgbe ị na-ese foto. N'ezie, enwere m ike ịsị na ihuenyo bụ otu n'ime akụkụ kachasị amasị m banyere Huawei P40 Pro.
Batrị nke Huawei P40 Pro a bụ 4.200 mAh ma o doro anya na anyị enwebeghị ike itinye ya n'ule ahụ, ọ bụ ezie na mmetụta dị mma na kọntaktị ndị mbụ. Enyele a ngwa ngwa ụgwọ nke 40W esonyere ya na ntụgharị ikuku na-agbanwe agbanwe nke ruru 27W, nke bụ ezigbo ara, n'eziokwu ọ ga-esiri ike ịchọta chaja ikuku na ndakọrịta Qi nke na-ewepụta ike dị ukwuu. N'ezie, ọ bụ ezie na batrị abụghị nke kachasị ukwuu, Huawei nwere ahụmịhe gosipụtara na ọ na-echekwa ndụ ya.
Esemokwu dị iche n’etiti ụdị dị iche iche
Isi ọdịiche dị na igwefoto, nke ọ bụla ga-enwe otu ihe mmetụta ọzọ, site na 3 na P40 ruo 5 na P40 Pro +. Ekwesiri ighota na a ga-ewu P40 Pro + na seramiiki na ọ ga-enwe naanị agba abụọ, ọcha na oji, nke naanị, nakwa eziokwu ahụ na o nwere 12GB RAM nke dị 4GB karịa ụdị ndị gara aga kwuru. Anyị ga-eme ka ị mata ma anyị ga-ewetara gị nyocha ahụ n'oge na-adịghị anya.
Ihe anyị na-ekwesịghị ịkọ bụ na na anyi nwere bu ohere ịhọrọ n'etiti agba anọ: Agba ntụ, iku ume ọcha, oji na oji na mgbakwunye na seramiiki imecha nke ga-abụ nanị ihe nlereanya kachasị elu nke nso, Huawei P40 Pro + nke anyị na-atụ anya ịnwale mgbe e mesịrị.
Dị ka anyị kwurula, anyị nwere olile anya na vidiyo nke na-eduga n'ọgba aghara a na nke mbụ ga-atọ gị ụtọ ma anyị chetara gị na n'izu na-abịa ị ga-enwe ike ịhụ nyocha zuru oke n'izu na-aga na ọwa YouTube na Androidsis yana na weebụsaịtị ya, www.androidsis.com ebe enwere ọtụtụ totorales na nyocha banyere ngwaahịa gam akporo dị na ahịa, ị ga-atụ uche ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Huawei P40 Pro - Unboxing na ule mbu
Na mgbakwunye na P40, Huawei ewebatala Watch GT 2e, onye inyeaka Celia, Huawei Video na ndị ọzọ.
Tronsmart na-emekọ maka afọ iri nke Aliexpress